Indlela yokuchonga iKorale yoMlilo kunye nokuphatha izibilini
I-coral yomlilo ( iMillepora dichotoma ) ayilona i-coral yangempela, kodwa i-kolony-forming marine organism ehambelana neentlanzi ze-jelly kunye ne-anemones. Iyaziwa ngokubanzi njenge- hydrocoral . Njengeentlanzi ze-jelly, i-coral yolwandle inokubangela iintlungu ezibuhlungu. Iindidi kumanzi aseTropiki nakwindawo ephantsi komhlaba kufuneka zenze umgudu wokufunda indlela yokuchonga le nto kunye nokuyiphepha.
Kolu lulandelayo, funda ezinye zezixhobo eziphambili ukuba zikhangele. Emva koko, siza kuxubusha ngeendlela ezimbalwa zokuphepha i-coral yomlilo ngokupheleleyo, nendlela yokuphatha izibonda ukuba unamahloni ngokwaneleyo ukufumana enye.
I-Brownish-Orange okanye i-Brownish Green Color, eneeNgcebiso ezimhlophe
I-coral yomlilo iyinkqonkqo - iguqula ngokweziko ze-coral eziqhelekileyo kwaye ihlala iphosakele ngenxa yolwandle. Iimpawu ziye zabika ukubona umlilo wekorale kwi-blade, i-branching, ibhokisi, kunye neifom ze-encrusting. Njengokuba i-coral yomlilo idideka kalula namanye ama-corals, umbala uyindlela efanelekileyo yokuyijonga.
Uninzi lomlilo we-coral wu-brownish-orange okanye uhlaza okomhlaza. Ngokusoloko kunomcebisi omhlophe, njengokorali yomlilo ezama ukufihla ecaleni kwesiponji kule sithombe.
Uninzi lomlilo we-coral unama-visible stingers. Iindidi eziqaphelisayo ezijonga ngokukhawuleza zingaqwalasela i-coral's transparent, i-hair-like stingers ephuma emlilweni womlilo njengamacinci amancinci.
Inyaniso yokuba ama-stingers ayanzima ukuwabona esinye sezizathu zokubasa umlilo kwe-coral eziqhelekileyo. I-diver diver can think that he is still millimeters away from fire coral, xa eqinisweni uye waqhaqhazela emacaleni amancinci.
Ukugwema izibilini zeCoral Corings
Ukuthintela ukuqhuma komlilo we-coral, abahlukahlukeneyo kufuneka bahlale kude ngokwaneleyo ukuba baphephe ukudibanisa ngengozi. Zininzi izixhobo ezibonakalayo ezinobungozi zifihla i-coral umlilo.
Nangona kunjalo, iziganeko ezingalindelekanga zinokubangela ukuba i-diver egciniweyo ingabonakali ngokukhawuleza ngokubhekiselele emkhombeni. Ukugqoka i-wetsuit epheleleyo, okanye kwesikhumba esincinci se-lycra dive, kuya kunceda ukukhupha ukudida okudityanisiweyo kwindawo ethile ngomlilo we-coral.
Ukucima kwamakhorali omlilo kubonakala njengamaqhekeza okanye i-welts ebomvu kwaye ibuhlungu kakhulu. Umlilo we-coral we-coral unokuba nzima ukuwufumanisa ngenxa yokuba aqala ukutshisa kude kube ngu-5 ukuya kwe-30 imizuzu emva kokuthintana naye, kwaye umphambukisi akayi kuqonda okokuqala ekhunjulwe.
Ukulimala okubangelwa ubomi baselwandle kunokufuna iintlobo ezahlukeneyo zonyango, ngokuxhomekeke kubuqili. Xa kunokwenzeka, ahlukeneyo kufuneka adibane nogqirha oqhelanisiweyo kunye neyeza lokudibanisa ukuze abone ngokuqinisekileyo ukulimala njengomlilo we-coral.
Ukwelapha Ukulimala KwamaKorale Omlilo
Ukuphatha imililo yomlilo i-coral, iindidi ezinamava ziphakamisa iintlobo ezahlukeneyo zonyango, kodwa nantsi indlela eyamkelekileyo:
Gcoba ngamanzi olwandle. Gwema amanzi amnandi kuba iya kwandisa intlungu.
Faka isicelo se-acetic acid (iviniga) okanye i-isopropyl alcohol.
Susa iintente ngeempuphu.
Immobilize iphela. Ukuhambelana kunokubangela ukuba isifo sisasazeke.
Faka isicelo se-hydrocortisone njengoko kuyimfuneko yokubamba. Yeka ngokukhawuleza ukuba kukho na iimpawu zentsholongwane zivela.
Ukuba akukho zibonakaliso zokusabela okuthe tye, ziza kukhululeka iintlungu zonyango, njenge-ribuprofen.
Ukuba i-diver diversify the breath breath; ukuvuvukala ngolwimi, ubuso okanye umqala; okanye ezinye iimpawu zendlela yokuphendula, ukunyanga ukuba uphendule umbane kwaye ufune unyango olusondeleyo. Nangona iimeko ezinqabileyo, ezinzima kakhulu zenzeke.
I-Pencil Shading Egg Exercise
I-8 Eyona ndlela ihamba phambili yokuVavanywa kweGR Iikhosi zokuthenga ngo-2018
I-THook i-Delphi Class nge-Source Code
Iphutha loGragram Inkcazo kunye nemizekelo
Iimpawu ze-30 eziphezulu kwi-1960s
Indlela yokusebenza kunye neengelosi ukunqoba umlutha wokutya
Ibhishobhi yaseBridget - Okokuqala Ukufa Kwizilingo Zama-Salem Trials